တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး… – Khit Lunge
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ် …. ။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် … ။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။
အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ မတွေးမိပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို သူအရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေလို့ပါပဲ … ။သင့်အကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါတွေးလွန်းပြီး သူ့ရဲ့စိတ်က သင့်အနားမှာပဲ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ပါပဲနော် … .။
သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က အရမ်းလွမ်းတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ပဲ သူနဲ့ဆုံတာမျိုး၊ မချိန်းထားပဲနဲ့ တစ်နေရာတည်းကို အတူတူရောက်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။ သင့်ဖက်ကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့် တကယ်တော့ သင့်က ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်လူက သင့်ကို အရမ်းသတိရနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။
တစ်ခါတလေ ဘာကို လွမ်းလို့လွမ်းမှန်းမသိပဲ ဆွေးနေတယ်၊ ငိုချင်သလိုလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က အရမ်းလွမ်းနေလို့ပါတဲ့ … ။ သင့်ကိုလွမ်းလွန်းလို့ ခံစားနေရတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေက သင့်ဆီမှာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့ သဘောပေါ့လေ … ။
တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကိုအရမျးလှမျးနမှေနျးသိနိုငျမယျ့ ထူးထူးခွားခွား လက်ခဏာ (၃) မြိုး…
အခဈြမှာ ထူးဆနျးတဲ့ မှျောစှမျးအငျရှိတယျလို့ လူတဈခြို့ကပွောကွပါတယျ …. ။ ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ တဈစုံတဈယောကျက ကိုယျ့ကိုလှမျးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယျတိုငျက ဖှငျ့မပွောရငျတောငျ သဘာဝတရားကွီးက သူတို့အစား ပွောပေးတတျပါတယျ … ။ လူတဈယောကျက သငျ့ကို ဖှငျ့မပွောပဲ တိတျတိတျလေးအရမျးလှမျးနတေယျဆိုတာကို သိနိုငျမယျ့လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော … ။
အိပျမကျဆိုတာ စိတျဝိညာဉျမှာဖွဈနတေဲ့ အရာတဈခုပါ။ တဈစုံတဈယောကျရဲ့အကွောငျးကို မပွောမိ၊ မတှေးမိပမေယျ့ အိပျမကျထဲမှာ သူ့ကို တှတေ့ယျဆိုရငျတော့ သငျ့ကို သူအရမျးလှမျးပွီး သတိရနလေို့ပါပဲ … ။သငျ့အကွောငျးကို ထပျခါထပျခါတှေးလှနျးပွီး သူ့ရဲ့စိတျက သငျ့အနားမှာပဲ တဝဲလညျလညျဖွဈနလေို့ပါပဲနျော … .။
သငျ့ကို တဈစုံတဈယောကျက အရမျးလှမျးတဲ့အခါ မမြှျောလငျ့ပဲ သူနဲ့ဆုံတာမြိုး၊ မခြိနျးထားပဲနဲ့ တဈနရောတညျးကို အတူတူရောကျနတောမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ … ။ သငျ့ဖကျကတိုကျဆိုငျမှုလို့ ထငျကောငျးထငျနိုငျပမေယျ့ တကယျတော့ သငျ့က ဒါမှမဟုတျ တဈဖကျလူက သငျ့ကို အရမျးသတိရနလေို့ဖွဈပါတယျနျော …. ။
တဈခါတလေ ဘာကို လှမျးလို့လှမျးမှနျးမသိပဲ ဆှေးနတေယျ၊ ငိုခငျြသလိုလို ဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ သငျ့ကို တဈယောကျယောကျက အရမျးလှမျးနလေို့ပါတဲ့ … ။ သငျ့ကိုလှမျးလှနျးလို့ ခံစားနရေတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေ သငျ့ဆီမှာ ရောငျပွနျဟပျနတေဲ့ သဘောပေါ့လေ … ။